आमहडतालले जनजिवन कष्टकर- परीक्षा प्रभावित, बिरामी हिँडेरै अस्पताल ! | सुदुरपश्चिम खबर
वीर अस्पतालमा फलाअ‍ेपका लागि म्हेपीबाट छोरीसहित पदैल आएकी ६५ वर्षीया चन्द्रमाया बस्‍नेत । तस्बिर ः अनिश रेग्मी र कान्तिपुर
आमहडतालका कारण अस्पताल जाने बिरामीले पनि सास्ती भोग्नुप¥यो । राजधानीका ठूला सरकारी अस्पतालको ओपीडीमा निकै कम बिरामी पुगे । दिनमा लगभग १ हजार ५ सय बिरामी पुग्ने वीर अस्पतालमा आधा जति बिरामी मात्रै आएको निर्देशक डा.केदारप्रसाद सेन्चुरीले बताए । ‘अस्पतालतर्फ कुनै सवारीसाधन आउन दिएनन्, म पनि हिँडेर आएँ,’ उनले भने, ‘ट्याक्सी चढेका बिरामी पनि सहिदगेटमै रोकेपछि अस्पताल आउन पाएनन् ।’
निर्देशक डा. सेन्चुरीले स्वास्थ्यकर्मी टाढाबाट आउनुपर्ने भएकाले आकस्मिक र शल्यक्रिया सेवामा समेत असर परेको बताए । दिनमा करिब १ हजार २ सय बिरामी पुग्ने महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल पनि बन्दको प्रभावमा प¥यो । सवारीसाधन नचलेकाले नयाँ बिरामी भर्ना हुन र पुराना बिरामी डिस्चार्ज भएर घर जान नपाएको अस्पतालका प्रवक्ता रामविक्रम अधिकारीले बताए । ‘नियमित सेवामा असर प¥यो तर पहिलेका बन्दमा जस्तो धेरै प्रभाव परेन,’ उनले भने, ‘घर जानैपर्ने बिरामीलाई अस्पतालकै एम्बुलेन्समा हालेर पठायौं ।’